Madaxweynaha oo amar ku bixiyay in la furo sanduuqa naafada Qaranka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 2 May 2016
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Wasaaradda shaqada ku amray inay dhisaan sanduuqa naafada Qaranka, si bulshada Soomaaliyeed ay uga qeyb qaadato u gurmashada dadka aan lixaadooda dhameystirneyn.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad dhinacyo badan ka jeedinayay xuska maalinta shaqaalaha Adduunka ee 1-da May oo shalay lagu qabtay Xarunta Wasaaradda shaqada ayaa ku amray mas’uuliyiinta Wasaaradda shaqada inay xoogga saaraan dhanka arrimaha bulshada, gaar ahaan inay furaan sanduuqa naafada Qaranka, si loo caawiyo.
“Dadka Naafada ah dalkan waa dalkooda, dadkooduna waa anaga, marka waa inaan bilownaa sidii aan u taageeri lahayn, Wasiir waa in la furaa sanduuqa Naafada Qaranka, si dadka Soomaaliyeed ee jooga dal iyo dibad ay uga qeyb qaataan, qofna miisaankiisa ma cusleeyo, waa inaan ka faalo qaadno mas’uuliyadooda” ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynuhu mar uu ka hadlayay amniga waxa uu sheegay in ciidamada ay ku guuleysteen inay ka hortagaan qaraxyo ay maleegayeen maleeshiyada Al-Shabaab, loona baahanyahay in laga hortago dhalinta ay marin habaabinayaan.
Madaxweynaba waxa uu ka hadlay in beesha caalamka ay gacan ka geysato sidii mashaariic horumarineed loogu hirgelin lahaa dalka, oo fursado shaqo loogu abuuri lahaa dhallinyarad
“Maanta caalamka waxaan rabnaa inaan u sheegno, si dhallinyaradeena ay tahriibka uga soo noqdaan iyo badaha ay ku dhamaanayaan, fursad shaqo ayan u baahanay, waxaan u baahanay waddooyinkii oo naloo dhiso, waxaan u baahanahay in mashruucii koronta nalga caawiyo oo bulshada ay helaan koronto raqiis ah” ayuu Madaxweynuhu hadalkiisa ku daray.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay in Dowladda Soomaaliya ay soo martay marxalado kala duwan bulshadana looga baahanyahay inay iska ilowdo wixii xumaan ah ee horey u dhacay, una istaagaan sidii ay la isu garaabi lahaa oo ay bulsahda gacmaha isqabsan lahaayeen.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ku amray wasiirada aanan ku shaqeyn xarumahooda inay ku deydaan wasaradaha dib u dhistay xarumahoodii,